Public Health in Myanmar: HIV handbook 2
Thanks again. I have this book asahard copy. Soft file is also very useful for me as I am quite lazy to carry books around.:)
နားနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ပိုစ့်မတွေ့လို့ နောက်ဆုံးေ၇းထားတဲ့ ဒီပိုစ့်မှာပဲ မေးလိုတာမေးလိုက်ပါတယ်။
လေယာဉ်စီးရင် နားကိုက်တတ်ပါတယ်။ လုံးဝမခံမရပ်နိုင်အောင် ကိုက်တာပါ သုံးခါစီးရင် နှစ်ခါကိုက်ပါတယ်။ လေယာဉ်ဆင်းခါနီးရင် ပိုကိုက်တတ်ပါတယ်။ အဲဒါဘာကြောင့်ပါလဲ။ မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရ မလဲ။ လေယာဉ်စီးမှသာဖြစ်တာပါ ကျန်တဲ့အချိန် တစ်ခါမှမကိုက်ပါဘူး။ ညီမက သွေးအားလဲနည်းပါတယ် ၉၀-၆၀ ကပုံမှန်သွေးပေါင်ပါ။ လေယာဉ်ပေါ်ရောက်ရင် ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်လို့ပါ နားကိုက်လွန်းလို့လေ။ ဆေးပညာစာတွေအတွက် ကျေးဇူးပါ။